Maalinta: Noofambar 7, 2017
"Meeeshay baska? Adeegga weyn ee Balikesir Muxamed Sh
Qeybta Mashiinka Macluumaadka Dowlada Hoose ee Magaalada Balıkesir, Waaxda Gaadiidka iyo Qeybaha Tareenka iyo BTT A.Ş. iyo BALTUS softiweer iyadii oo la galiyay howlihii loo qabtay isuduwida. Gaadiidka Dadweynaha ee Balikesir [More ...]
Rinjiyeyn Ka Shaqeynta Wadada Wadooyinka Nostalgic
Calaamadaha iyo tilmaamayaasha ayaa lagu rinjiyeeyay jidka tareenka ee nostalgic kaas oo ay dhowaan adeegsan doonto Dawladda Hoose ee Düzce. Wadada tareenka xamuulka qaada ee loo yaqaan "The taraafikada taraamka" [More ...]
Barnaamijka Tumer CHP wuxuu joojiyay joojinta adeegga tareenka Mersin-Iskenderun
Tumer CHP, TCDD Transportation Inc. Maareeyaha Guud Veysi Kurt isagana waa laga wada hadlay. Veysi Kurt oo wacaya xafiisyada xafiisyada markay wada sheekaysi la yeesheen Tümer isla markaana warbixin siiyay Tümer ayaa yidhi, "Haddii qalad jiro, waa la sixi doonaa. Khadkan [More ...]
Transist 2017 Gaadiidka Gaadiidka Dadweynaha Ayaa La Helay Milkiilayaasha
Abaalmarino heer sare ah ee gaadiidka dadweynaha ayaa lasiiyay kuwa ku guuleysta finalka Shirka Caalamiga ah ee Gaadiidka Istanbul iyo Carwada, oo loo qabtay 10 sanadkan. Transist 2017 10, oo loo agaasimey hoggaanka sare ee Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul. Shirka Gaadiidka Caalamiga ah ee Istanbul iyo [More ...]
Talo muhiim ah iyo digniin ku socota tareenka
Gürdoğan, 'Aan samee waxa faa'iido ah. Yaanan ku raadin hal abuur 'ayuu yidhi. In kasta oo xiriirinta Baku Tbilisi Kars khadka tareenka ee Trabzon looga wada hadlay dhowaan xafladda uu ka qeyb galay Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan, Dhoofinta Badda Cas ee Bariga [More ...]
Darica Metro waxay noqon doontaa wax soo saarka gudaha!
Barta ayaa lagu riixay Darica Metro taas oo ay fulin doonto Dowlada Hoose ee Magaalada Kocaeli. Raiisel wasaaraha ayaa soo saaray wareegto maanta oo lagu amrayo in boqolkiiba 51 gawaarida ku shaqeeya mashruucyada tareenka in markaa kadib la hirgaliyo wax soo saar gudaha ah. [More ...]
Guddoomiye Ardahan Bilmez Yanlızçam Xarumaha Daraasada Ski-ga
Guddoomiyaha Bilmez wuxuu aaday Yalnızçam Ski Resort oo ay weheliso Ordah Atalay iyo Ardahan kuxigeenka xoghayaha guud Anıl Aksel iyo isbahaysiga cusub ee saddex-kiloomitir iyo barafka ah [More ...]
GAZİRAY Raac Gaadiidka
Duqa Gaziantep Fatma Şahin ayaa dadweynaha ogeysiisay wax qabadyada sanadlaha ah ee 3,5, waxay sharrax ka bixisay faahfaahinta mashaariicda qiimaha sare leh, iyo sidoo kale maalgashiga taariikhiga ah, dhaqanka iyo bulshada iyo sidoo kale mashaariicda sida dhaw ula xiriira mustaqbalka magaalada. [More ...]
Metro iyo trams waxay noqon doonaan ugu yaraan 51 gudaha
Wareegto ka soo baxday xafiiska Ra'iisul Wasaaraha ee wax soo saarka tareenka dhulka hoostiisa mara, tareenka fudud, taraamka iyo gawaarida la midka ah ee leh ugu yaraan alaabada xNUMX ee guryaha ayaa lagu daabacay Rasmiga Rasmiga ah. Wareegtada lagu bixiyay saxiixa Raiisul Wasaaraha Binali Yıldırım, gaariga fiilada, gaaska, monorail, [More ...]
Nadiifinta Gaadiidka Dadweynaha ee Balikesir
Qorsheynta Gaadiidka Dawlada Hoose ee Magaalada Balıkesir iyo Kooxaha Nidaamka Tareenka, gaadiidka dadweynaha si ay uga ilaaliyaan muwaadiniinta ku safraya cudurada faafa si looga takhaluso dhamaan baabuurta jirka. Gaar ahaan xagga nadiifinta shaqada [More ...]
Bosphorus View to Airport-ka cusub ee Istanbul
Wasiirka Gaadiidka Arslan, Mashruuca Gegada Diyaaradaha ee Istanbul ayaa gebi ahaanba ah mid laga xasuusto dhismihii Turkiga, ayuu yidhi. Lan Istanbul waxay noqon doontaa aag weyn oo aan waajibaadka laga qaadin halkaas oo aragtida Bosphorus laga siin doono xarunta, Ars ayaa yiri Ahmet Arslan, Wasiirka Gaadiidka, Arimaha Badda iyo Isgaarsiinta. [More ...]
Saldhigga Maqalka ee Stockholm Sida Loo Sheegay
Stockholm, caasimada Scandinavianka ee Sweden, waxaa lagu aasaasay mideynta jasiiradda 14. Jasiiradani waxay kuxiran yihiin marinno. Magaalada metrooga ee Stockholm, oo loo yaqaanaa bandhig faneedka ugu dheer adduunka [More ...]
Wadooyinka waawayn ee Shiinaha iyo xawaaraha sare ee tareenka ayaa kor u kacaya
Inkastoo Shiinuhu uu ku jiro habka isbeddelka dhismaha ee loogu talagalay kobaca tayada leh, waxa si degdeg ah loogu casriyeynayaa kaabayaasha gaadiidka ee dalka. Lafaha ugu weyn ee geedi socodkan casriyeynta waa jidadka cusub iyo xawaaraha sare. [More ...]
Toddobaadkii hore, furitaan muhiim ah ayaa ka dhacay Baku mashruuca Iron Silk Road laga bilaabo Beijing ilaa London. Laga soo bilaabo Shiinaha si ay Uzbekistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Azerbaijan, Georgia, Turkey, Bulgaria iyo dalalka kale ee Yurub iyada oo [More ...]